အမှာစာလုံးအသေးရှငျဘုရငျအားဖြင့်မှုတ်သွင်း — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ဒီနေ့ကျနော်တို့အရပ်ဖက်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု၏ဗွေဆော်ခေါင်းဆောင်များ၏အမွေဆိုးဆင်နွှဲ, ဒေါက်တာ. မာတင်လူသာကင်း Jr က. သခင်ဘုရားသည်လူတမျိုးလာအောင်နှိုးဆွဖို့ဒီလူကိုအသုံးပြု, နှင့်တန်းတူရေးကိုဦးတည်နေတဲ့လူကိုရွှေ့. ပြုမိခံရဖို့အလုပ်လုပ်နေဆဲရှိပါသည်, သို့ရာတွင်သူ၏အလှူငွေတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောခဲ့သည်. အဘယ်သူမျှမသူရဲကောင်းစုံလင်သည်, နှင့်ဒေါက်တာ. ရှငျဘုရငျကိုအဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ခဲ့သည်, ငါမူကားနညျးလမျးမြားစှာမှာသူ့ကိုအရမ်းလေးစားမိပါတယ်ငါသည်သူ၏အမွေအားဖြင့်မှုတ်သွင်းတာပါ. ဤတွင်ငါ့ကိုအတုယူအားမိမိအသက်တာကိုအကြောင်းသုံးအရာဖြစ်ကြ၏.
ဒေါက်တာ. ရှငျဘုရငျသညျကြှနျုပျတို့၏ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျပြံ့နှံ့ခဲ့သောမတရားမှုကိုစက်ဆုတ်စိတ်ပျက်မိကြောင်း, ထိုသို့ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေအားမိမိအသက်တာကိုဆက်ကပ်အပ်နှံ. သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်, သူကသူ့ကမ္ဘာကြီးအတှကျဘုရားသခငျ၏ရူပါရုံကိုမြင်လျှင်, သူကဖိနှိပ်မှုများ၏အဆုံးသည်အပရောဖကျတို့ခေါ်သံကိုမြင်လျှင်, နှင့်သူတရားမျှတမှုကိုသွားလာကြည့်ဖို့အသည်းအသန်ခဲ့သည်. ငါတရားမျှတမှုကိုအဘို့ဤစိတ်အားထက်သန်မှုအရမ်းလေးစားမိပါတယ်, ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျ၏ကိုယ်ပိုင်နှလုံးထဲမှာအလုပျလုပျဖို့ဆက်လက်ဆုတောင်းပဌနာ. ငါကူကယ်ရာမဲ့ဖို့ဧ​​ဝံဖိနှိပ်ဘို့စစ်တိုက်ခြင်းနဲ့ဟောပြောဖို့လိုခငျြ.
မိမိအနုပျိုနေသော်လည်း, ဒေါက်တာ. ရှငျဘုရငျ၏ပရောဖကျမိန့်ခွန်းနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားသောရူပါရုံကိုအလှုပ်ရှားမှု၏ခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်. သူကနောက်ကျောထိုင်နှင့်တိုင်ကြားဘဲ, သူအရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ဦးဆောင်. သူဟာလူမည်းလူရှေ့ဆက်အထောက်အကူထင်သောအရာကိုအပေါ်ရှင်းလင်းပြတ်သားခဲ့, သူဦးတည်အခြားသူများကိုဦးဆောင်. ဤသည်ကိုအစဉ်အမြဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြောင်းလဲဝိုင်းသောအကြမ်းမဖက်ခုခံအတွက်ရလဒ်. ငါတို့ရှိသမျှသည်ခေါင်းဆောင်မှုဒီလိုမျိုးကနေသင်ယူနိုင်. ထိုသို့ခေါင်းဆောင်မှုလက်ထပ်မယ့်အခါ, Vision ၏သာတန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါသည်. သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုသွားလာဗျာဒိတ်ရူပါရုံကူညီပေးခဲ့.
ဒါပေါ့, မိမိအရန်ပွဲအပြုံးများနဲ့ထွေးပိုက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်မခံခဲ့ရ. သူကသူ၏အသက်တာသူချီတက်အခါတိုင်းစွန့, မိနျ့တျောမူ၏, သို့မဟုတ်ကန့်ကွက်. သူလုပ်နေတာခဲ့သည်ကိုသိအန္တရာယ်ရှိခဲ့သည်, သေးသူသည်မိမိလူတို့အဘို့မျဉ်းမှာမိမိဘဝကိုထားရန်ရဲစွမ်းသတ္တိရှိခဲ့. သူရင်ဆိုင်အတိုက်အခံသူ၏ရူပါရုံမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးဘူး, သို့မဟုတျသူ၏ခေါင်းဆောင်မှုလြော့. သူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ဘာကြောင့်ကိုယ်ကသာသူ့ကိုသတိပေး. ငါသည်ထာဝရဘုရားသည်ငါ၌သူ၏ဘုန်းအသရေဘို့သူ့နိုငျငံတျောနှငျ့တိုက်ပွဲတွေကိုဆိုလိုတာပါတစ်ခုအခိုင်အမာရဲစွမ်းသတ္တိအလုပ်လုပ်မယ်လို့ဆုတောင်းပဌနာ.
ငါသည်သင်တို့ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာသူ့ရဲ့စံနမူနာအားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေတဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်, သင်တို့ကိုငါသူဒေါက်တာတဆင့်စကားပြည့်စုံသောအရာကိုအဘို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၌ငါ့ကိုပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်. ရှငျဘုရငျသ.
Pstan26 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:28 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
for the love of Nigeria • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:29 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Tamiehicks • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:30 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Dan Smith • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:30 နံနက် • ပြန်ကြားချက်